Very ka hita: Fampodiana ny sarivongan’i Laxmi-Narayan tao Patan ao amin’ny Lohasahan’i Kathmandu · Global Voices teny Malagasy
Very ka hita: Fampodiana ny sarivongan'i Laxmi-Narayan tao Patan ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu
Niverina tao amin'ny fonenany ilay Andriamanitra
Voadika ny 17 Desambra 2021 4:25 GMT
Kianja Patan Durbar, vakoka Iraisam-pirenena ao amin'ny Distrikan'i Lalitpur ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana.
Tsy an-jatony fa an'arivony ireo sary sokitra sy zava-kanto nisy nangalatra tao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu nanomboka tamin'ny taona 1950. Nesorina tao amin'ny toeram-pivavahana, ary napetraka tany amin'ny fanangonana manokana ataon'ny olo-tsotra sy tranombakoka zavakanto. Taorian'ny namoahan'ilay mpahay tantara momba ny zavakanto Lain Singh Bangdel ny boky tena malaza Stolen Images of Nepal (Sarin'i Nepal nangalarina) tamin'ny taona 1989, natomboka ny fampodiana ireo vakoka ireo. Na izany aza, ampahany amin’ireo entana voaroba ihany no tafaverina an-tanindrazana.
Ny fametrahana indray ny sarivongan'i Laxmi-Narayan antsasany lahy ary antsasany vavy tao amin'ny Patko ao Patan no ohatra farany tamin'ny fiverenan'ireo sarivongana nangalarina. Nalaina tamin'ny taona 1984, nataon'i Sotheby lavanty tamin'ny vidiny sahy ambony indrindra tany New York tamin'ny taona 1989 ny sarivongana varahina tamin'ny taonjato faha-12 ka hatramin'ny faha-15 ary nampindramina ny Mozean'ny Zavakanto Dallas.
Raha nahita ilay sary manjavozavo an'i Laxmi-Narayan tao amin'ny Tranombakoka Dallas i Joy Lynn Davis, mpanakanto, mpikaroka ary mpanorina ny Tetikasa Vakoka Ara-javakanto sy Ara-kolontsaina Himlayan, raha nanao fikarohana Google momba ny tetikasany Mahatsiaro ireo sary sokitra very tao Kathmandu, dia nahafantatra avy hatrany ilay sarivongana. Nolokoiny tamin'ny volamena 23 karat ireo sary nangalarina ary naveriny an-tanindrazana tamin'ny toerana misy azy avy.
Hamaky bebe kokoa: Naverin'ilay Mpanakanto Amerikana tany Nepal niaraka tamin'ny Borosiny Hoso-doko ireo Sary sokitra nisy nangalatra
Miramirana i Joy nahita ilay sarivongana tafaverina tany amin'ny toerana niaviany, ny Tempolin'i Narayan, tamin'ny 4 Desambra 2021.
Though I painted Lakshmi-Narayan 2013-14 and located it in the @DallasMuseumArt in 2015, today was my first time meeting #LaxmiNarayan in person. Thank you for capturing the moment, @KanakManiDixit ! https://t.co/cI5U7im1Pa
— Joy Lynn Davis (@JoyLynn_Davis) December 4, 2021
Na dia nandoko an'i Lakshmi-Narayan 2013-14 aza aho ary nahita izany tao amin'ny @DallasMuseumArt tamin'ny taona 2015, androany no fotoana voalohany nihaonako manokana tamin'i #LaxmiNarayan. Misaotra anao nanapika sary ny fotoana, @KanakManiDixit !
Dr. Emiline Smith, mpampianatra momba ny heloka bevava ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow, nisioka hoe:
🎉 Laxmi-Narayan is home! 🎉 Made possible through the collaboration of so many different parties, today was an incredibly joyous day and so important for Patan, Kathmandu Valley and Nepal #livingheritage #lootedheritage #returnofthegods #intangibleheritage #community pic.twitter.com/Cc1Rf5SoJC
— Emiline Smith (@DrEmilineSmith) December 4, 2021
🎉 Tonga ao an-tanindrazana i Laxmi-Narayan! 🎉 Natao tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ireo antoko maro samihafa, andro tena nahafaly ny androany ary tena zava-dehibe ho an'i Patan, Lohasahan'i Kathmandu ary Nepal
Naka sary ny fiverenana sy ny fametrahana indray an'i Laxmi-Narayan tamin'ny alalan'ny fakantsariny ilay mpaka sary Sunil Sharma .
Nentina tany amin'ny Mozea Patan ny sarivongan'i Laxmi-Narayan rehefa nafindra tany amin'ny fitazonana Nepaley. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana.
Ny sarivongan'i Laxmi-Narayan antsasany lahy sy atsasany vavy. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana.
Ny sampin'i Laxmi-Narayan nentina tamin'ny filanjana ho any amin'ny Tempolin'i Narayan, fonenany, niainga avy ao amin'ny Mozean'i Patan. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana.
Nodiovina ny fitoeran-tongony hamerenana an'i Laxmi-Narayan. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana ny fampiasàna azy.
Ny Tempolin'i Narayan, fonenan'i Laxmi-Narayan. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana
Ny sampin'i Laxmi-Narayan napetraka indray tao amin'ny tempolin'i Narayan. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Nahazoana alalana.
Niverina tao amin'ny fonenany Andriamanitra ary napetraka ny rafitra fiarovana maoderina mba hiarovana ny maha-andriamanitra. Na izany aza, sarivongana maro no mbola miandry ny fampodiana azy ireo, ary mbola zavatra tranainy maro kokoa avy any Nepal no mbola misy mangalatra — toy ny halatra farany an'i Bhairav ​​tao Halchowk ao Kathmandu.
It is very sad to know that Halchowk Bhairab has been stolen from the site yesterday night. 🙁 pic.twitter.com/abONnsxmCy
— Roshan Mishra (@r0shanmishra) December 7, 2021
Mampalahelo tokoa ny mahafantatra fa nisy nangalatra tao amin'ny toerany omaly alina i Halchowk Bhairab. 🙁